ANYỊ GA-AKWỤSỊ NDỊ “ALMAJIRI AGADI” N’AKA ANYỊ – ASATU, ỌHANEZE, – hoo!haa!!
Ọka – Ótù Ọhaneze Ndigbo, ngalaba Anambara Steeti nakwa ótù jikọtara ọgbakọ obodo nile dị n’Anambara Steeti a na-akpọ Anambra State Association of Town Unions (ASATU) ekwuola hoo!haa! na ha ga-eji aka ha were kwụsị ndị “Almajiri Agadi” ịmịbata ọzọ na Steeti ahụ.
Nnukwu Onyeisi, Anambra State Association of Town Unions, Ichie Alex Onukwue, onye nyere ịdọ aka na ntị a n’Ọka oge ọ gwara ndị nta akụkọ okwu, sịrị na ebumnuche ndị Almajiri ndị a gbachara afọ ọnụ ruru unyi ma bụrụkwa nke ha agaghị anabata ka “nwoke ghara ịnọ be ya nọpịa mkpụrụ amụ”.
O kwuru sị, “Ótù Anambra State Association of Town Unions (ASATU), n’aha obodo nile dị n’Anambara Steeti, ji ohere a ekwupụta mgbarụ ihu nakwa mwute anyị banyere atụmatụ arụrụ ala ụfọdụ ụmụ amaala ala a ji, ndị kpọrọ ekwo nkụ, na ha ga – ezubata “ndị a na-enyo enyo” site na Mgbago Ugwu ala a were bata n’Ọdịda Anyanwụ ala, dịka Anambara Steeti nakwa Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda nile.
“Anyị na-enye ịdọ aka na ntị maka ndị ala ha dị n’agwa ọjọọ nke izubata ndị a a na-enyo enyo, ma ha abụ Almajiri ma ha abụghị, na ha nwaa ya ọzọ, na obodo nile dị n’Anambara Steeti ga-ezute ha etu kwesịrị ekwesị. Nkea apụọla n’egwu ụmụaka”
N’okwu nke ya, Onyeisi, Ọhaneze Ndigbo na Steeti ahụ, Ichie Demian Okeke Ogene, kwuru na oge eruola maka ndị Steeti ahụ iji aka chekwaba onwe ha.
“Anyị na-arịọ Gọvanọ Anambara Steeti ka ọ hapụ anyị ka anyị mee ihe dịịrị anyị iji chekwaa onwe anyị ebe Gọọmenti Etiti adịghị nkwadebe ichekwa anyị”
Anambara Steeti bụ ótù steeti n’Ala-Igbo nwere òtù nchekwa aghaziri nke ọma. Ọzọkwa, ASATU bụ òtù jikọtara ọgbakọ obodo nile dị na Steeti ahụ bụkwa nke gbanyesiri mgbọrọgwụ ike nke na Gọọmenti steeti ahụ anaghị etinye aka n’ọchịchị ha etu n’ekwesighi ekwesị.
Ndị Steeti ndị ọzọ n’Ala-Igbo, o ruo n’omume…
Previous Post: EJIMA KORO : NWANYỊ ỌRỊA KORO AMỤỌLA EJIMA NA LEGỌS
Next Post: NỌỌSỤ “ỌKỤ ELU” GBA ỌTỌ BỊA ILETA NDỊ ỌRỊA KORO